Jaketị / Vests → Mgbasa ozi • ọkachamara na kọmputa P&M
Jaketị mgbasa ozi na uwe mkpuchi doro anya na ọ bụ ezigbo nhọrọ maka ọdịda na oge udu mmiri. Uwe anyị na-enye dị ezigbo mma, mana enwekwara ike ịba uru. Ọ dị irè maka nchebe megide ihe ndị dị na mpụga dịka ifufe na mmiri ozuzo.
Uwe mmiri ozuzo na akwa mkpuchi ikuku na uwe
Mbelata ndị ahụ kwesịrị nlebara anya dị ukwuu mmiri ozuzo na ikuku, n'ihi ojiji ha na ọnọdụ ihu igwe dị na mpụga siri ike. Na-emepụta Jaketị na uwe mkpuchi a na-eji teknụzụ ọgbara ọhụrụ eme ihe ka ngwaahịa a wee rụọ ọrụ ọtụtụ afọ n'ọnọdụ kachasị mma ma na-ejigide njirimara ya.
Stylesdị dịgasị iche iche maka nkasi obi na nchekwa
Na nke anyị ụlọ ahịa ị ga-achọta Jaketị na kamizelki n'ụdị dị iche iche maka ụmụ nwanyị, ụmụ nwoke, ụmụaka na unisex. A dịgasị iche iche nke nha na agba na-enye gị ohere iji kwekọọ na ngwaahịa na mkpa gị ma chọpụta ha na agba na agba nke ụlọ ọrụ ma ọ bụ ụlọ ọrụ.
Nke a bụ nhọrọ bara uru karịsịa mgbe ị na-enye iwu uwe mgbasa ozitumadi ọ bụrụ na anyị ahọrọ ya nhazi nke onwe site na ogbugbu onye ebi.
Ha mejupụtara otu dị mkpa uwe mkpuchi, meziwanye nchekwa n'ọhịa na n'okporo ụzọ. Ha zuru oke maka njem mgbe ọchịchịrị gbara, yana kwa ụbọchị igwe ojii.
Onyinye ahụ gụnyekwara uwe edo edo, nke na-atụgharị uche maka ụmụaka, nke ga-eme ka ọhụhụ na nchekwa nke nwatakịrị ahụ n'ụzọ ma ọ bụ n'okporo ụzọ dị n'etiti ụlọ na ụlọ akwụkwọ. Uwe a na-atụgharị uche maka ma ndị okenye ma ụmụaka ga-enyere aka belata ihe ize ndụ nke ihe ọghọm n'ihi ekele dị mma.
Anyị na-enyekwa jaket na-egosipụta na enwere ike ịtọpu aka uwe na mkpuchi, nke bara uru karịsịa na oge mgbanwe na ebe ọ bụla ọrụ chọrọ mgbanwe na gburugburu ebe obibi na ọnọdụ okpomọkụ. Jaketị ahụ nwere jaketị ajị anụ dị n'ime, nke enyere akara 3M gosipụtara, na-ezute ụkpụrụ EN ISO. Enwere ike ịhazi ngwaahịa ahụ, mana n'ihi ọtụtụ seams na akpa, ebe akara ahụ pere mpe, ohere ịbanye na azụ.
Aesthetically mere Mbipụta
Ihe ịchọ mma (ihe mkpuchi kọmputa ma ọ bụ Ihu akwụkwọ) na jaketị na uwe mkpuchi ejiri nlezianya mee ihe niile.
Ntị maka ịdị elu dị elu pụtara na uwe ị zụrụ ga-abụ onye nnọchi anya ọkachamara nke ụlọ ọrụ ahụ. Companylọ ọrụ anyị nwere ogige igwe nke aka ya, nke na-enye anyị ohere ijikwa usoro ịchọ mma mma n'ụzọ ọ bụla, wee si otú a meghachi omume ozugbo na nrụrụ nrụpụta.
Ka ngwaahịa ahụ na-abawanye na mkpa nke ndị ahịa, anyị kpebiri iji ụzọ dị iche iche chọọ ihe ịchọ mma ihe mkpuchi kọmputakamakwa ihuenyo ebi akwụkwọ, sublimation i nnyefe okpomọkụ.
Anyị na-akpọ gị òkù ka ị bia ọnụego ọsọ ọsọ na n'efu.
uwe mgbokwasị ọrụuwe ụmụ nwanyị na-arụ ọrụuwe ụmụ nwokeụmụ nwoke mkpuchi ụmụ nwanyịuwe mkpuchi na-arụ ọrụụmụ nwoke mkpuchi ụmụ nwanyịụdị uwe na-egosipụtavest ndị ọrụvests Allegro na-arụ ọrụvests ọrụ oge ọkọchịuwe mkpuchi na-arụ ọrụụdị uwe na-egosipụtawork vests olxvests na-arụ ọrụ na mbipụtauwe ọrụ oyijaket ọrụ ụmụ nwokejaketị ndị ọrụ oge oyijaketị ọrụJaketị ọrụJaketị ọrụ dị nkọ AllegroJaketị mmiri ozuzo ụmụ nwokemmiri na-arụ ọrụ mmiri ozuzoJaketị ọrụJaketị ọrụ Allegrouwe ọrụ na-acha ọchaụmụ nwanyị jaket ọrụgbakwunyere akwa jaket ọrụjaket ọrụ ụmụ nwokejaket ọrụ oyiJaketị ndị na-adịghị ere ọkụjaketị ọrụJaketị ọrụJaketị ọrụ oge oyiọrụ jaketị olxjaakị Jaketị na-arụ ọrụjaketị ọrụ ọrụjaak arụ ọrụ nke mmirijaketị arụ ọrụ na mbipụtaJaketị na-arụ ọrụ na-echegharịjaket ọrụ oyiJaketị arụ ọrụ oge Allegrojaketị ọrụ ụmụ nwanyị nke oge oyiJaketị ọrụ oge oyiJaketị ọrụ oge oyi na-egosipụta Allegrojaakị na-arụ ọrụ n'oge oyiụlọ ahịa Jaketị n'oge oyijaketị nke oge oyiJaketị ọrụ oge oyijaketị oge oyiJaketị oge oyiuwe ọrụ jaịlịịewere jaket ọrụjaket ọrụ mascotJaketị ọrụ ndị a na-arụ ọrụ na yaJaketị ọrụvest ndị ọrụjaketị ọrụjaketị oge oyiuwe ndị ọrụjaket ọrụ oyi